Zvinangwa Nyowani Zvinosanganisira Kubatsira Varimi Kuti Vagone Kusimudzira - Potatoes News
MUCHANGO chayo ichangobva kuburitswa chakatangisa kuburitswa 2020 Sustainability Report, Corteva Agriscience yakamisikidza zvinangwa zvesainzi zvekudzikisa gasi inodzikisa gasi uye yakaratidza chinangwa chayo cha2030 chekusimudzira kugadzikana kwechikafu chepasi rose, icho chinosanganisira kubatsira nekubatana nevarimi.
Chirevo chekusimudzira chaCorteva chiri kuburitswa gore rimwe chete mushure mekunge kambani yazivisa makore gumi negumi ekuzvipira kusimudzira kusimudzira kwevarimi, ivhu, munharaunda uye mukushanda kwekambani.
Chief Executive Officer Jim Collins akati: "Nekugadzirisa dambudziko iri repasirese nhasi, tiri kusimbisa kugona kwedu kurima chikafu, kukura budiriro uye kuvaka indasitiri inoenderera iyo inobatsira vanhu kuti vabudirire kuzvizvarwa zvinotevera."
Anne L. Alonzo, SVP External Affairs uye Chief Sustainability Officer, Corteva Agriscience, vakati chirevo ichi chinopa ruzivo rwekuti izvi zviri kugadziriswa sei kuburikidza nezvigadzirwa, kubatana pamwe nekuedza kwevashandi vayo 21,000 pasi rese.
KuUK, Corteva ane mwedzi gumi nemasere muchirongwa chake che'Resilient and Ready 'chemakore matatu chinosanganisira kudzidziswa, rutsigiro rwehunyanzvi uye kuraira kuvarimi kuvabatsira kutora nzira dzekurima dzakaomarara.
Kuzvipira kwekambani kunosanganisira:
• 65% kuderedzwa kwakasimba kwechiyero chekutanga uye chechipiri
• 20% kuderedzwa kwakasimba kwechikamu chechitatu chisi
Chirevo ichi chinoratidzawo basa nemipiro yevashandi veCorteva yekuvandudza raramo yevarimi uye mashandiro avo vachichengetedza zviwanikwa nekuchengetedza ivhu, kusimbisa nharaunda nekuwedzera kugadzikana mukati mekushanda kwekambani.
Tags: Corteva agrisciencekubatsira varimi
NGI iri kufambisa iyo yehutsanana zviyero zvekufambisa zvikamu zvine nyowani chigadzirwa renji
Sarudzo yangu: John Deere munzira yakatambanuka 3,15m
Makiyi eTekinoro Zviratidzo Chibvumirano chekuisa Chemical Kufananidza Tekinoroji (CIT®) yeVatangi vePatato